WAR DEG DEG AH: M/weynaha Somaliland oo kusoo wajahan Laascaanood & Xaalad dagaal oo taagan | Puntlandi.ca
Home Puntland WAR DEG DEG AH: M/weynaha Somaliland oo kusoo wajahan Laascaanood & Xaalad dagaal oo taagan
WAR DEG DEG AH: M/weynaha Somaliland oo kusoo wajahan Laascaanood & Xaalad dagaal oo taagan
Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku soo wajahan magaaladaas, isla markaasna uu booqan doono ciidamadiisa ku sugan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool oo ay dhawaan qabsadeen.
Madaxweynaha Somaliland oo ay galbinayaan gaadiidka dagaalka ayaa subaxnimadii maanta magaalada Oog oo uu kuyaalo Saldhiga ugu weyn ciidamada maamulkiisa, kula hadlay Askar tababar loo soo xiray.
Col, Biixi ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan nabadda iyo daganaanshaha gudaha Somaliland oo ay sugayaan Amniga xaduudaha, wuxuuna sheegay in faragalin ay ku soo qaaday dawladda faderaalka ee Soomaaliya.
Ilaa hadda ma cadda in uu booqan doono magaalada Tukaraq, oo ay maalmo ka hor qabsadeen ciidamadiisa, waxaana safarkan kuwehliya gudoomiyaha baarlamaanka ee Somaliland oo ka soo jeeda deegaankan.
Lama garanayo sidda ay xaaladu noqon doonto xili ay labada ciidanba dagaal qarka u saaran yihiin, ayna goobahaas geeyeen ciidamadii ugu badnaa oo ka yimaaday gobalada kala duwan ee deegaanada ay xukumaan.